Saaka iyo Zoobe – Ka duwan Sidii hore! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Saaka iyo Zoobe – Ka duwan Sidii hore!
Muqdisho – Meel dheer ayaan ka arkay socodka gaadiid kusii jeeda dhankaa iyo jidka Zoobe. Waxaan ogaaday in ugu danbeyn saakay dib loo furay. Qorshahaygu horraan wuxuu ahaa inaan docda kale kasoo galo xaruntayda shaqada. Qalbigayguna ima siinayn inaan kusoo socdaalo walow aan ka warqabay in xalay dib loo furay. Hayeeshe waxaan qaatay midda adag. Waxaan kusoo dhiirraday inaan dib ugu soo lugeeyo.
Previous: Nin booliska ku amray inay 1,000 jeer share dhahaan sawirkiisa si uu isugu dhiibo.
Next: Emre oo sharaf ku tilmaamay damaca Juventus ay ku doonayso.